News Archives - Page 105 of 107 - Top Media News - "သမီးလေး - သို့"
ဝဘောဂီဆေးရုံမှ လူနာနှဈဦး စိုးရိမျရတဲ့ အခွအေနရှေိနကွေောငျး ဒေါကျတာ သာထှနျးကြျောပွောကွား
လူနာနံပါတ် ၈ နဲ့ နံပါတ် ၁၆ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မြန် ရောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့ လူနာ အယောက် ၂၀ ထဲက နံပါတ် ၈ နဲ့ နံပါတ် ၁၆ ဟာ အခုအချိန်မှာ ရောဂါပြင်းထန်နေပြီး စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်လို့ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိပုဂ္ဂိုလ် ဒေါက်တာ သာထွန်းကျော်က ပြောပါတယ်။ လက်ရှိအချိန်မှာ …
သင်ျကွနျကာလအတှကျ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့ အထူးအရေးကွီး အမိနျ့တဈခု ထုတျပွနျ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့က လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ COVID-19 ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် လာမယ့် မြန်မာ့နှစ်သစ်ကူး အတာသင်္ကြန်ကာလအတွင်း အပြင်မထွက်ဖို့ အမိန့်စာတစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူများအနေနဲ့ သင်္ကြန်ကာလရုံးပိတ်ရက်များဖြစ်သည့် ၁၀.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့မှ ၁၉.၄.၂၀၂၀ ရက်နေ့အထိ မဖြစ်မနေ ဆောင်ရွက်ရမည့် ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များနှင့် အစားအသောက်ဝယ်ယူခြင်း ကိစ္စရပ်များမှလွဲပြီး မိမိရဲ့နေအိမ်မှာသာ နေထိုင်လိုကြောင်း၊ ပြည်သူများ အားလုံးပူးပေါင်း ပါဝင်ကြရန် ထုတ်ပြန်ထားခဲ့တာပါ။ လက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း …
အထငျသေးတဲ့နိုငျငံကွီးတှေ အံ့သွကုနျကွပွီ .မွနျမာနိုငျငံ ကံကောငျးလှနျးတယျ
မြန်မာနိုင်ငံ ကံကောင်းလွန်းတယ်. .ကမ္ဘာ့မြေပုံမှာ အိမ်မြှောင်သဏ္ဍာန် သေးငယ်ငယ်နိုင်ငံလေးတစ်ခု.. ဆေးဝါးမပြည့်စုံ ဆေးရုံမလုံလောက်..သူနာပြုလျော့နည်းနည်း. .ဆရာဝန်ရှားပါး၊ ငွေကြေးက ဗလာ ခေတ်မှီနည်းစနစ်ကမရှိ..ဒါတွေကိုကြည့်ပြီး ကမ္ဘာ့မျက်နှာကြီးနိုင်ငံတွေက အထင်သေးကြတယ် သနားကြ တယ် စိုးရိမ်ကြတယ် ရင်တမမဖြစ်နေကြတယ်။ ခေတ်မှီလွန်းတဲ့ သူတို့နိုင်ငံကြီးတွေတောင်မှ ကုမရမနိုင်မနင်းဖြစ် သေကြေကြ လက်ပိုက်ကြည့်နေကြရ. . .ဒီနိုင်ငံလေးတော့သနားစရာပေါ့..စောင့်ကြည့်တွေနဲ့ လမ်းဘေးမှာလူပြည့်ကျပ်ပြီး သုဿာန်ကြီးသဖွယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့.. သူတို့နိုင်ငံ သက်ဆိုင်ရာသံရုံးတွေကလည်း အရေးတကြီး ကြေငြာချက်တွေကို …
ကုတင်နံပါတ်(၁၉)ကလူနာ အေအိုင်ဒီအက်စ် ရောဂါသည်တစ်ဦး သားဖွားဆောင်ထဲ ရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းကအိုးပူပူထဲ ပေါက်ပေါက် ထည့်ဖောက်လိုက်သလို သားဖွားဆောင်တစ်ခုလုံး ချက်ချင်းပေါက်ကွဲသွားခဲ့တယ်။ အစည်းအဝေးတုန်းက ဆေးရုံအုပ်ရှေ့မှာ ဘာမှမဟရဲခဲ့ကြပေမယ့် အစည်းအဝေးအပြီးမှာ နပ်စ်တွေက အချင်းချင်းဝိုင်းအုံဖွဲ့ကြပြီး “ရောဂါကူးခဲ့ရင် ဘယ်သူတာဝန်ယူမလဲ?” လို့ငြင်းခုံခဲ့ကြတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ချို့ကတောင် “လူနာသုံးတဲ့ ခွဲစိပ်ကိရိယာတွေ၊ အိပ်ရာခင်းတွေကတစ်ဆင့် တစ်ခြားလူနာတွေကို ပြန်ကူးစက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?” လို့ ညည်းတွားနေကြတယ်။ညည်းခဲ့ ငြင်းခဲ့ပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံးမှာ …
စိတျမွနျလကျမွနျ လကျမနှေးသောအလှူရှငျမြားကွောငျ့ ပိုးသတျဆေးကို အားရပါးဖွနျးနိုငျခဲ့တယျဆိုတဲ့ ဦးကြျောသူ
ပရိသတ်ကြီးရေ ဝါရင့်သရုပ်ဆောင် မင်းသားကြီးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဦးကျော်သူကတော့ အနုပညာမောင်နှမတွေသာမကပဲ ပရိသတ်တွေလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ သူတစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကျော်သူက အနုပညာအလုပ်တွေအပြင် လူမှုရေးအကျိုးပြု ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမှာ ကိုယ်တိုင်ပါဝင် ဦးစီးဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ လတ်တလောမှာဖြစ်ပွားကူးစက်နေတဲ့ ကိုရိုနာ ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး နယ်ပယ်တွေမှာလည်း အတက်နိုင်ဆုံး နိုင်ငံ နှင့် လူမျိုးအတွက်တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေဝိုင်းဝန် ကူညီနေတာကို ပရိသတ်တွေလည်း တွေ့မြင်ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းက နာရေးကူညီမှုအသင်း( ရန်ကုန်)ရဲ့ အလွန်းအားထားရတဲ့ ဘုတ်အဖွဲ့ဝင် ကိုရူပနဲ့ …
ပွညျပမှပွနျလာသူရှိကွောငျး တာဝနျသိအကွောငျးကွားသူ နအေိမျဖကျြဆီးခံရ
၂၅၊ မတ် ၊ ၂၀၂၀ နေ့က ရပ်ကွက်ကြီး (၁၂ ) ၊ ဖက်ဆွတ်ကန် ( မြို့ရှောင်လမ်းအနီး )တွင် နေအိမ်သို့ ထိုင်းမှပြန်လည်ရောက်ရှိလာသူ အမျိုးသမီး တစ်ဦးရှိကြောင်းကို တာဝန်သိ ပြည်သူတစ်ဦးက ရပ်ကွက်ကြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံ အသိပေးခဲ့မိရာ ပြည်တော်ပြန် အမျိုးသမီး၏ သားက မူးယစ်သောက်စားရမ်းကားခဲ့ကြောင်း၊ အသိပေးသူ၏ နေအိမ်ရှိပြတင်းပေါက်များ၊ ကာရံထားသော သွပ်ပြားများ …
ဆနျဆီနှ ငျ့ ဆေးပစ်စညျးမြား ကို ဈေးနှုနျးသတျမှတျ မညျ၊ ပိုရောငျးပါက ထောငျ ၃ နှဈခြ မညျ
ဆန်ဆီနှ င့် ဆေးပစ္စည်းများ ကို ဈေးနှုန်းသတ်မှတ် မည်၊ ပိုရောင်းပါက ထောင် ၃ နှစ်ချ မည် C OVID – 19 ကို အ ကြောင်းပြု၍ ဆန်အပါအဝင် အ ခြေခံ စားသောက်ကုန်စည်များ၊ ဆေးနှင့်ဆေးပစ္စည်းများ ဈေးတင် ရောင်းလျှင် အစိုးရကထိန်းသိမ်း အရေးယူမည်ဟု စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်း ရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် …
ဘယျဒသေက ဘယျမွို့က လာလာ ရနျကုနျမွို့ကို ဝငျပါက ၁၄ ရကျ စောငျ့ကွညျ့ခံရမညျ
ရန်ကုန်က ဘယ်ကပြန်လာလာ ၁၄ ရက် Q တဲ့ .. အလုပ်ပြန်ဆင်းရမယ်ဆိုပြီး နယ်ကနေ ရန်ကုန်ပြန်လာတာ .. Express မစီးရဲလို့ အိမ်ကလိုက်ပို့ပေးတယ် .. အဆောင်ကိုဖေဖေတို့ချပေးသွားတော့ ည ၉ နာရီကျော်.. ချပေးပြီး ဖေဖေတို့ကပြန်သွားတယ် ကိုယ်လည်းပုံမှန်လိုပဲ အခန်းတေရှင်းနေတာ .. ည ၁၀ နာရီလောက်မှာ တံခါးလာခေါက်ပါတယ် အဝေးပြေးကလာတဲ့သူတွေ့လိုက်လို့တဲ့.. ယောကျာ်းလေး …
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့ (WHO) ၏ ဧပြီ ၂ ရက် နောက်ဆုံး ထုတ်ပြန်ချက်အရ လက်ရှိချိန်တွင် တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ တွင် COVID-19 ရောဂါ ကူးစက် ခံရသူ ၈၉၆,၄၅၀ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ယခင်နေ့ထက် ၇၂,၈၃၉ ဦး တိုးမြင့် ခဲ့ကြောင်း ၊ သေဆုံးသူ စုစုပေါင်း အနေဖြင့် ၄၅,၅၂၆ …